प्रदेश ५ – Page3– Pahilo Page
तुलसीपुर । ६२ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस दाङमा विभिन्न कार्यक्रम गरी एक हप्ता सम्म मनाइने भएको छ । जिल्ला सहकारी संघको आयोजनामा दश वटै पालिकाहरुमा विभिन्न कार्यक्रम गरिने भएको हो । रक्तदान देखि गौ सेवा सम्मका कार्यक्रम गरिने संघका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद शर्माले जानकारी दिए । संघले बिहिबार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरी ...
दाङ, १० माघ । राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङले विभिन्न ठाउँहरुमा विरोधसभा गर्ने भएको छ । ‘‘संघीयता, राष्ट्रिय बिखण्डन र प्रतिगमनको खतराका विरुद्ध संघर्ष गरौ ! महङ्गी, हिंसा र बलात्कारको अन्त्य गरौं’’ भन्ने मूल नाराका साथ विरोधसभा गर्न थालिएको हो । यसक्रममा भालुबाङमा माघ १९ गते विरोध सभा हुने भएको छ । शाही घोषणा भएको कालो दि...
शिवनगर टोल विकास संस्थाको अध्यक्षमा अर्याल
दाङ, ८ माघ । शिवनगर टोल विकास संस्था तुलसीपुर ७ शिवनगरको अध्यक्षमा किशोर अर्याल चयन भएका छन् । संस्थाको आठौँ साधारण सभा तथा चौथो अधिवेशनले उनलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो । नयाँ कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष जानका गैरे, सचिव टीकाराम केसी, कोषाध्यक्ष सीमा बुढाथोकी रहेका छन् । त्यस्तै, सदस्यहरुमा कालु बादी, हिमाल भण्डारी, शारदा...
तुलसीपुर, २२ पुस । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले जथाभावी गल्ली गल्लीमा राखिएका बजार तत्काल हटाइने बताएका छन् । उपमहानगरपालिकाले तरकारी तथा फलफूल बजार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै नगरप्रमुख पाण्डेले आफूलाई मन लागेको ठाउँमा कसैले पनि पसल थाप्न नपाउँने बताए । “बजारलाई सुन्दर र व्यवस्थित ब...
पूर्वमन्त्री रेखा शर्माले किन गरिन् उपकूलपतिलाई यस्तो आग्रह ?
काठमाडौं, १७ पुस । पूर्वमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की नेतृ रेखा शर्माले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गरेको सेवामा शुल्कवृद्धिप्रति कडा आपत्ति जनाएकी छन् । पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा सांसद शर्माले प्रतिष्ठानले बृद्धि गरेको सेवाशुल्क तत्काल फिर्ता लिन प्रतिष्ठानकी उपकुलपतिलाई आग्रह गरेकी छ...
काठमाडौं, १ पुस । दाङमा आइतवार भएका दुई अलग अलग दुर्घटनामा परी २ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार आइतवार दिउँसो २ बजेतिर घोराही–लमही सडकखण्डमा पर्ने लमही नगरपालिका वडा नं. ५ कुलमोडमा नेपालगञ्जदेखि घोराहीतर्फ आउँदै गरेको ना ४ ख ९५६६ नं. को बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको रा ३ प ९६०४ नं. को मो...